“Wax danbi ah ma aanan galin. Wax siyaasad ahna kama qayb qaadan. Si fiican oo…”boqor Buur’madow | Baraarug News
Home Wararka “Wax danbi ah ma aanan galin. Wax siyaasad ahna kama qayb qaadan....
“Wax danbi ah ma aanan galin. Wax siyaasad ahna kama qayb qaadan. Si fiican oo…”boqor Buur’madow
Hargeysa,(baraarugnews.net)-Boqor Cismaan Aw-Maxamuud Maxamed, oo ku magac dheer, Boqor Buurmadoow, waxa uu ka mid yahay madax dhaqameedka Somaliland. 14 kii November ee sanadkaan ayuu yimid magaalada Muqdisho. Wareysi uu siiyay BBC Soomaali waxa uu ku sheegay inuu u yimid heshiisiinta siyaasiyiinta reer Wuqooyiga ee jooga Muqdisho.
Previous articleMuxuu yahay kulan ku dhex-marey Wasiirka Wasaaradda Biyaha Somaliland Iyo Hay’add Caalami ah magaalada Hargeysa?
Next article“Boqor Buur Madow Somaliland miyuu ka hiiliyay mise wuu u hiiliyay?